Indoda yaseCapricorn kunye noMfazi weVirgo ukuhambelana kwexesha elide - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Indoda yaseCapricorn kunye noMfazi weVirgo ukuhambelana kwexesha elide
Indoda yaseCapricorn kunye noMfazi weVirgo ukuhambelana kwexesha elide
Zininzi izinto indoda yaseCapricorn kunye neVirgo efanayo. Okokuqala, bobabini banoxanduva kwaye balumkile. Baya kuhlonipha kwaye bawaxabise amaqabane abo, babenze ubomi babo kunye buhle kangangoko.
Unengqiqo kwaye uyondla, ngoko uya kumnyamekela kakuhle. Nabantu baya kuqaphela ukuba bayathandana kakhulu.
Iikhrayitheriya ICapricorn Man Virgo Woman Degree yokuNgqinelana
Kwintsomi, iCapricorn yiSage kwaye iVirgo nguMphilisi. Balumkile kwaye bakhule ngokwaneleyo ukuba banokwakha usapho kunye.
Njengeempawu ezimbini zoMhlaba, indoda yaseCapricorn kunye nebhinqa laseVirgo ziya kuzinikezela omnye komnye. Ubomi babo abuyi kuba mnandi kakhulu, kodwa baya kuyonwabela ukukhathalela usapho lwabo kwaye babe ngabantu abadala. Imiqondiso yomhlaba iyaziwa ngokuqonda okuphezulu komsebenzi kwaye kufuneka ihlale phantsi.
Umfazi Virgo uya kufumana ukuthandana indoda Capricorn umdla. Umtsalane phakathi kwabo awunakuphikwa. Uya kumthanda ukuba unomdla, uya kumthanda ngokuziphatha.
Basenokungabi nalo ixesha elininzi kakhulu lokwenza amadinga kuba bobabini baya kuba bexakeke kakhulu ngumsebenzi. Kodwa ubudlelwane apho amaqabane abonwabela ubomi babo bobuchwephesha busebenza bhetele kunaleyo apho amaqabane axinana khona.
Ebhedini, aba babini baya kuba nothando kunye nenkanuko. Ngenxa yokuba ugcinwe kakhulu, iVirgo inokuthi ithathelwe ingqalelo ibanda kwaye ikude. Kodwa enyanisweni, uya kuba nothando oluninzi lokunika.
Konke malunga nexesha neli nenekazi. Akasoze angxamele ukuwela emntwini njengoko ehlalutya abantu ngaphambi kokuba abathembe. Ungumntu ofezekileyo we-zodiac, ngoko kuya kumthatha ixesha ngaphambi kokukhetha iqabane.
Ngenxa yokuba ukrelekrele, uzimisele, usebenza nzima kwaye uzilungise kakuhle, indoda yaseCapricorn iya kubhenela kuye. Ekuqaleni, usenokubonakala enomdla kakhulu kwikhondo lomsebenzi. Kodwa enyanisweni, lo mfo ufuna ubudlelwane bexesha elide.
Njengaye, unemigangatho ephezulu kwaye akasokuze azinze kokuncinci. Umfazi wamaphupha akhe kuya kufuneka agqibelele kuye. Icala lakhe lokugcina alisoze limvumele ukuba agobe imigaqo. Akukho namnye kubo onomdla wokubonisa uthando lwabo esidlangalaleni.
yintoni uphawu lwe-zodiac lwango-februwari 20
Lonke ubudlelwane bunezinto zabo ezilungileyo nezingalunganga umfazi weVirgo kunye nendoda yaseCapricorn abekho ngaphandle. Le miqondiso mibini iyahambelana kakhulu, kodwa ikwahluke kakhulu. Akayi kumela inkani yakhe, ngekhe akwazi ukujongana nendalo yakhe egxekayo.
Ungoyena mqondiso ugxekayo we-zodiac, ngoko ke kufuneka alumke angamngxengi kakhulu.
Kwakhona, umfazi waseVirgo usenokuthetha kakhulu ngendoda ethe cwaka yaseCapricorn. Ngenxa yokuba uya kuzingca kwaye uza kuchitha ixesha elininzi emsebenzini, uya kusokola. Ke ngoko, obu ayibobudlelwane ngaphandle kobunzima.
Ubuncinci bobabini baxolela kwaye bayaguquka, ngenxa yoko abayi kubambelana ingqumbo omnye nomnye ixesha elide. Oku kuthetha ukuba banokunxibelelana kakuhle.
Iimfihlo kunye nezinto ezingenakuthethwa kwabanye ziya kwabiwa ngolonwabo phakathi kwabo. Yenza isiseko esomeleleyo kwisibini esonwabileyo ukuba nethemba elingaka phakathi kwamaqabane.
Xa kukho into embi eyenzekayo komnye wabo, baya kuba nakho ukusombulula ingxaki ngokusebenza kunye kodwa imeko yabo yokugqibelela inokuba yingxaki. Ukukwazi ukwenza ulungelelwaniso kunye nokwamkela inyani yokuba izinto azisoloko zihamba ngendlela enqwenelekayo yeyona nto banokuyenza kulwalamano lwabo.
Banokude bahlukane ukuba akukho namnye kubo ovulekileyo ukwenza uhlengahlengiso. Akwanelanga ukuba nonxibelelwano oluhambelanayo. Abantu ababini ngokudibeneyo kufuneka basebenze kubudlelwane babo ukuba bafuna ukubenza busebenze.
Ngenxa yokuba akukho mahluko mkhulu phakathi kwabo, indoda yaseCapricorn kunye nebhinqa laseVirgo liza kuthatha isigqibo sokutshata kungekudala emva kwemihla yabo yokuqala. Kuyamangalisa ukubona beqondana kakuhle. Bobabini baxabisa usapho kunye nokuzinikela kumaqabane abo ngaphezu kwayo nayiphi na into esehlabathini.
Uhloniphekile kwaye uzolile, oko kuthetha ukuba uphelele kuye. Uya kuyazi inyani yokuba angalikhathalela kakuhle ikhaya labo, ke uya kumfuna ebomini bakhe ngonaphakade.
Umfazi waseVirgo uyakuxhasa indoda yaseCapricorn kuyo yonke into ayakufuna ukuyenza ngomsebenzi wakhe. Akayi kukhathazeka ukuhlala ekhaya nokukhathalela abantwana ngelixa esenza imali yobomi babo obutofotofo.
Bobabini bayonwabele into yokuba betshatile kuba bayavana kwaye banemilinganiselo efanayo. Indawo yabo yasekhaya iya kuba mnandi kwaye ihonjiswe kakuhle, kuba akukho namnye kubo othanda ukuchitha ixesha elininzi ngaphandle.
Ngokuqinisekileyo uya kuba negadi, uya kwenza iofisi entle enethala leencwadi elikhulu. Eli nenekazi lelinye leempawu ezicocekileyo kwi-zodiac, uyaziwa ngokuthanda yonke into ehleliweyo. Ke, uqeqesho aluyi kuba yingxaki kwaba babini.
Ukuba banabantwana, yonke into ebomini babo iya kutshintsha ngokupheleleyo, kodwa baya konwaba ngakumbi kukunyamezela le meko intsha. Baya kuba nothando kwaye babe ngqongqo nabantwana babo. Usapho lwabo luya kuba nayo yonke into, ukusukela kwizixhobo zakutshanje ukuya kweyona mpahla ipholileyo kunye neeholide ezingaqhelekanga.
Kwindoda yaseCapricorn Virgo umfazi obhinqileyo, omabini amaqabane afuna okuhle, ubomi basekhaya ngokwabo. Ikhaya elonwabileyo, abantwana abonwabileyo kunye neqabane elonelisekileyo yile nto baphupha ngayo bobabini. Ulwalamano lwabo lunokuthelekiswa kakhulu negadi egcwele iintyatyambo kuzo zonke iindawo zehlabathi.
Ingcebiso yokugqibela yeNdoda yaseCapricorn kunye neVirgo Woman
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, zombini ziimpawu zomhlaba, inye kuphela eyikhadinali kwaye enye inokutshintsha. Oku kuthetha ukuba zenzelwe omnye komnye.
Njengaso nasiphi na esinye isibini phaya, kufuneka benze utshintsho kubomi obonwabisayo kunye. Kodwa ngenxa yokuba bejolise kwikhondo lomsebenzi, banokufuna ukufumana ixesha lokuchitha kunye.
Ukuba banamaxesha ohlukeneyo omsebenzi, kunokwenzeka ukuba baphele bebonana kuphela ngeempelaveki nangexesha lekhefu. Kuhle ukuba nomsebenzi ophucukileyo, kodwa kungangcono ukuba nobudlelwane obusempilweni ngokunjalo.
Ukuba indoda yaseCapricorn ifuna ukwenza umfazi weVirgo awile kuye, kufuneka ayifumane. Ngokukhawuleza akumbona, uya kuba nomdla ngakumbi ekufumaneni ukuba zeziphi iimfihlo anazo.
loluphi uphawu lwe-zodiac ngo-Okthobha 26
Umoya wakhe omangalisayo uhlala ubenza abantu babe nolwazi ngaye. Nje ukuba baqale ukuthetha, aba babini baya kuba nomdla omnye komnye. Bobabini bayakwazi ukugcina incoko emnandi iqhubeka.
Ukuba inguye onqwenela ukumtsala, kufuneka abuze kuphela ukuba zeziphi izicwangciso anazo ngekamva. Xa indoda yaseCapricorn iqala ukuthetha ngomsebenzi wakhe, akaze ayeke. Uyathanda ukwazi umfazi ahamba naye uzimele kwaye unamabhongo. Yiyo loo nto inenekazi leVirgo kufuneka lithethe ngomsebenzi walo.
Akayi kufuna ukwazi ukuba intombi yakhe yexesha elizayo ifuna ingqalelo yakhe. Masingalibali ukuba lo mfo akanalo ixesha elininzi ezandleni zakhe, ke baya kuthi mhlawumbi bahlangane xa beza kufumana ixesha.
Ukuba bakunye, indoda yaseCapricorn kunye nebhinqa laseVirgo kufuneka benze ulwalamano lwabo lube mnandi. Ukuba zizinto zonke ezinzulu ngekhe kuzifikise naphina.
Kuyacetyiswa ukuba aqale akholelwe kwinto yokuba ukugqibelela akunakwenzeka ukufikelela. Unokudana kakhulu ukuba uyaqhubeka nokukholelwa kumaphupha angenakwenzeka.
Xa esenza uthando, akufuneki alinde ukuba enze inyathelo lokuqala. Usenokucotha kancinci, kodwa emva kokuba i-spark inyuswe, izinto zinokuba nothando kwaye zibangele umdla phakathi kwamashiti.
Kucetyiswa ukuba amncede kuyo yonke imisebenzi yasekhaya. Uyakuthanda ukuxabiseka ngayo yonke into ayenzayo. Ukuphuma ukuya kwizidlo zothando ikwangumbono olungileyo.
loluphi uphawu ngo-Okthobha 24
AmaCapricorn Soulmate: Ngubani uMlingane wabo woBomi bonke?
IVirgo kunye neCapricorn ukungqinelana kuthando, ubudlelwane kunye nesondo
Indoda yaseCapricorn enezinye iimpawu
Iimpawu eziphambili zePig ye-Chinese Zodiac Sign
itaurus yowasetyhini kunye negemini eyindoda
nguwuphi umqondiso ngoDisemba 28
xa wohlukana nendoda yetaurus
loluphi uphawu feb 28
leo indoda kunye nesagittarius umfazi ebhedini